हामीलाई अपार समर्थन छ, ओली पक्षकाहरु अस्पताल त भर्ना भएका छैनन् ? : अध्यक्ष नेपाल - Prateek Nepal
हामीलाई अपार समर्थन छ, ओली पक्षकाहरु अस्पताल त भर्ना भएका छैनन् ? : अध्यक्ष नेपाल
January 13, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौं, नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समुहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूहरुलाई बिशाल समर्थन प्राप्त भएको बताउनु भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा अध्यक्ष नेपालले पोखराको कर्यक्रममा पनि अपार समर्थन प्राप्त भएको दावी गर्नुभयो ।
पूर्वएमाले कमजोर भएको पोखरामा ओली पक्षले दुई तीन सयको भेला भनेकामा २ हजार भन्दा बढी कार्यकर्ताको उपस्थित भएको बताउनु भयो । यो उपस्थितीले ओली गुटका मानिसहरु मूर्छित र अस्पताल भर्ना भएकी पत्तो लगाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वएमाले कमजोर मानिएको पोखरामा ओली गुटका मान्छेले दुई तीनसय भन्दा मानिस के आउलान त्यो पनि पुग्छन् की पुग्दैनन् भनेकामा २ हजारभन्दा बढीको बिशाल उपस्थिती भयो, ओलीको गुटका मानिसहरु मुर्छित भएका छन् की ? अस्पताल भर्ना भएका छन् की पत्ता लगाउनु होला ।’
जनसमुदायको तह, कार्यकर्ता, नागरिक समाज र प्रतिपक्षीबाट समेत अपार समर्थन प्राप्त भएको अध्यक्ष नेपालले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओलीले संविधान र पार्टीमाथि गरेको घातका बि’रुद्धमा सबैपक्ष रहेको पाएको सुनाउनु भयो ।
उहाँ सबै पक्षबाट एक्लिएको जनाउदै तानाशाहहरु सधैँ शंसारमा एक्लिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष नेपालले आफू मै मात्र हुँ भन्नेहरु अन्त्यमा बेशाहारा र निरिह हुने हुने दावी गर्दै केपी ओली पनि अन्त्यमा निरिह हुने बताउनु भयो ।
केपी ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिध्याउन खोलको, लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्र’हार गरेको र ठूलो त्याग तपस्याबाट प्राप्त भएको उपलब्धीहरु निमिट्याउन खोजेकोले आफूहरु निरास भएको बताउनु भयो ।
अध्यष नेपालले ओलीकै कदमबि’रुद्ध मोर्चामा रहेर अगाडि बडेको तर कुनै मत प्राप्तीका लागि मोर्चा नबनाइएको सपष्ट पार्नुभयो । अफूहरु कुने व्यक्ति बि[रुद्ध सोच नजराखी व्यक्तिको प्रविृत्ति बिरुद्ध मोर्चाबन्दी गिरेको उहाँको भनाइ थियो ।
नागरिक जिम्मेवारी र कम्युनिष्ट कर्तव्य निर्वाहका लागि मैदानमा उत्रिएकोले आफ्नो सोचहरु, मान्यताहरु, सहि बाटेमा र ओली गुट खराबबाटेमा भएकोमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । ओली गुटले फैल्याएको भ्रमहरु कुनै दुविधाविन एकएक गरि चिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओली झुट बोल्न माहिर र पुलिन्द भएकोले उहाँको झुटहरुलाइ सटिक रुपमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । ओलीको बिशेषता नै झुट भएको उहाँको आ’रोप थियो ।
यो पनि जान्नुहोस् !
काठमाडौं, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’ राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता हुने भएको छ ।
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार समूहलाई केही दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिनेछ । समूहमा आवद्ध नेताहरू बृजेशकुमार गुप्ता, पशुपति दयाल, ईश्वर दयाललगायतका नेताहरूको मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको त्रिपाठीले बताए ।
स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई दलका रुपमा दर्ता गर्ने भएपछि पार्टीका विधान बनाउनेदेखिका कामहरू भइरहेका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिक दल रहेको भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेकपासँग पार्टी एकता गर्नेभन्दा पनि आफूहरू दलको रुपमा स्थापित हुन लागेको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कमा बुधबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा त्रिपाठीले नेकपासँग पार्टी एकताका लागि राजनीतिक मुद्धामा कुरा नमिलेको एकीकरण अगाडि नबढेको बताए ।
समूहका तर्फबाट त्रिपाठी मन्त्री बनेका छन् । उनले यसअघि संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । संसद विघटन भएपछि मन्त्रिमण्डल पुनः गठन हुँदा त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
‘सूर्य’ चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भएका त्रिपाठीले संसद विघटनपछि पनि मन्त्री पद कब्जा गरेर बसेका छन् । उनले बृजेशकुमार गुप्तालाई मन्त्री बन्न पालो दिनुपर्ने थियो । तर, त्रिपाठीले गुप्तालाई मन्त्री बन्ने मौका नै दिएका छैनन् ।
स्वतन्त्र राजनीतिक समूहभित्र पनि त्रिपाठीको दब्दबा छ । त्रिपाठीले अन्य नेताहरूलाई अवसर नदिएपछि समूहभित्रै विवाद रहेको एक नेताले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिन च्यालेन्ज गरेका छन् ।
आज प्रज्ञा भवन कमलादीमा भएको काठमाण्डौ जिल्लास्तरीय भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएको भन्दै रोस प्रकट गरेका हुन् ।
‘केपी ओलीजीलाई मेरो चुनौती छ, पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिनुस् । कुन काममा भाँजो हाल्यो ?’ प्रचण्डले भने । केपी ओलीले पार्टीको सुझावविपरित काम गरेको उनको आरोप छ । देश कोरोना महामारीमा रहेका बेला सबैलाई समेटेर संयन्त्र बनाउँ भन्दा आफूलाई व्यंग्य गर्दै हिँडेको उनले स्मरण गरे । प्रचण्डले अघि भने, ‘पार्टीका नेताहरुको विश्वास लिन किन सकिँन भनेर केपी ओलीले हेर्नु पर्दैन ?
यदि ओलीले भनेको जस्तै पार्टीले काम गर्न नदिएकै भएपनि उनका सामू नेताहरुको विश्वास लिने वा बहुमत सदस्यहरुलाई गो अहेड भनेर राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।
रमेश प्रसाईं, नन्दा र श्रृङ्खला खतिवडाले गरे बृद्धबृद्दा असाहायकलाई बस्नकालागि भवन शिलान्यास (हेर्नुस् भिडियो)
‘केपी ओली ढटुवा हो ! इमानदारीतासँग ओलीको कुनै साइनो छैनः माधव नेपाल
‘धुर्मुस’को डायरीमा कोरिएको रंगशाला निर्माणको यस्तो कथा…
November 10, 2020 November 10, 2020 Ramash kunwar
हार्दिक बधाई : अभिनेत्री रेखा थापाले यी समाजसेवी केटासँग यो मितिमा बिहे गर्दै !
November 2, 2020 November 2, 2020 Ramash kunwar
साह्रै दु’खद खबर: मलेशियाका अस्पतालमा नेपा’लीका ३५ श’व !